समानान्तर Samanantar: January 2014
Posted by Govinda at 1/29/2014 07:25:00 PM No comments:
म अरविन्द केजरिवालको खासै प्रशंसक हैन। आम आदमी पार्टी बनाउने र तेसलाई स्थापित गराउन अरविन्दले देखाएको साहस र प्रयासको भने सराहना गर्छु। अहिले दिल्ली पुलिसका केही अधिकारीविरुद्ध उनले धर्ना थालेका छन्। हठ र आँट हेर्दा अरविन्द सफल हुन पनि सक्लान्। यद्यपि संचार माध्यममा उनको विरोध जसरी बढेको छ तेसको संकेत राम्रो छैन। अरविन्दको विफलताले नेपालमा पनि परिवर्तनका लागि अहिंसात्मक आन्दोलनका पक्षधरहरू िनराश हुन सक्छन् । उनको कार्यशैलीले धेरैलाई चित्त बुझेको छैन।
यस्तै त हैन तर पदमै बसेर आन्दोलनको समर्थन गर्दा आफूले भोगेको फजितीको सम्झना भयो। विसं २०४१ /४२ ितर हो शिक्षकहरूले देशव्यापी हडताल गरेका थिए। तिनका केही माग उचित पनि थिए तर आन्दोलनको प्रकृति राजनीितक थियो। पंचायती सरकार आन्दोलन दबाउन कस्सिएको थियो। म तनहुँ जिल्ला शिक्षा समितिको पनि सदस्य थिएँ।रामशाह माध्यमिक विद्यलय संचालक समितिको अध्यक्ष पनि थिएँ। हडताली शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्देशन मैले नै स्वीकार नगरेपछि अरूले पनि निहुँ पाएका थिए। तनावपूर्ण स्थितिमा शिक्षा समिितको बैठक बस्यो। माधवप्रसाद उपाध्याय सीडीओ थिए। शिक्षा समितिको अध्यक्ष जिल्ला पंचायत सभापति र उपाध्यक्षा सीडीओ हुने व्यवस्था थियो। बैठकमा उनको निर्देशनमा मेरोफगायत केही संचालक समिति भंग गर्ने प्रस्ताव पेस भयो। घुमाउरो पाराले मैले हडतालको विरोध गरे नहटाउने भनियो। मैले शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव राखेँ। मेरो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले पनि सीडीओका सामु बोल्ने आँट गरेनन्। बहुमत त सरकारी पक्षकै हुन्थ्याे। अन्ततः म एकछिन बाहिर निस्केको मौका पारेर मलाई हटाउने प्रस्ताव पास गरियो। अरू स्कुलमा त खासै धेरै फरक परेन तर रामशाहका प्रअको सरुवा भयो। अस्थायी शिक्षक हटाइए। सीडीओकै उक्साहटमा अञ्चलाधीश नरेन्द्र चौधरीकै सामु शिक्षकहरूमाथि हातपात गरियो। मलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने एउटा घटना त्यो पनि बन्न पुग्यो।
Posted by Govinda at 1/21/2014 02:37:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 1/21/2014 01:33:00 PM No comments:
छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेर अनशन बसेका अधिकारी दम्पतीको चर्चै हराइसकेको छ। हत्यालाई राजनीतिक आवरण दिएर न्याय खोस्नेहरूको हुँकारसामु निरीह नन्दप्रसादको चित्कार दबिनु अन्याय हो तर नेपाली समाजको 'बलेको आगो ताप्ने’ प्रवृत्ति सम्झने हो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन।
तिनको हेरविचारमा खटिएका वीर अस्पतालका डाक्टर र केही आफन्तबाहेक सायद अरू धेरैले अधिकारी दम्पती अझै अनशन गर्दैछन् भन्ने नै बिर्सिसके। नबिर्से पनि तिनको सम्झना आक्कलझुक्कल गरिने लहडमा सीमित भएको छ।
सामाजिक सञ्जाल समाजको ऐना हो भने अनशनकारीलाई नेपाली समाजमा उपहासको पात्रसमेत बनाइएको देखिन्छ। मोहनदास करमचन्द गान्धीले 'स्वराज’का लागि भारतमा अगिल्लो शताब्दीको पूर्वार्धमा अहिंसात्मक आन्दोलनको एउटा विधिका रूपमा अनशनको प्रयोग सुरु गरेका थिए। त्यति बेलाका अंग्रेज शासक र तिनका मतियारले पनि अहिंसात्मक सत्याग्रहको यसरी नै उपहास गरेका थिए। त्यस्तै मानसिकता अझै पनि रहेछ नेपाली समाजमा। सायद, हाम्रो समाज अहिले पनि अगिल्लो शताब्दीको सुरुतिरै छ विशेषगरी सोच र संस्कारमा।
डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति चाहिँ धेरैले अलिकति चासो लिएको देखियो। ती 'साधु' डाक्टरलाई चिन्ने र नचिन्ने धेरै जना भावनात्मकरूपमै मात्र भए पनि उनको संघर्षको समर्थक हुन पुगेका छन्। स्वार्थमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र पटक्कै संवेदनशीलता नभएको उर्बौलो जमातबाहेक अरू धेरैले डा. केसीको समर्थन गरेका छन्। नेपाली समाजमा आउन लागेकेा परिवर्तनको संकेत हुनसक्छ यो। लाग्छ, नेपाली समाज सामन्ती थिचाइबाट मुक्त हुन छटपटाइरहेको छ। राजनीतिक 'आवरण’ अब सामन्ती छैन। यस्तै राजनीतिक 'आभूषण’मा पनि सामन्ती छवि त्याग गर्न खोजिएको छ। विडम्बना, सामन्ती संस्कार र पद्धतिको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नेहरू भने आचरणबाट सबैभन्दा विलासी सामन्त हुनपुगे।
लोकतन्त्रको उज्यालो छिर्नै नदिने गरी लागेको सामन्ती कुहिरोबाट समाजलाई मुक्त गर्न प्रकाश छर्ने काममा मूलतः राजनीतिकर्मीले अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा यतिखेर त्यस्तो अग्रगामी नेतृत्वको अभाव छ। समाजका अरू क्षेत्रमा पनि स्वार्थको खेती नगरी सामन्ती संस्कारविरुद्ध उभिने अगुवाको खडेरी छ। आक्कलझुक्कल केही सज्जन अगाडि सर्छन्। अहिले डा. गोविन्द केसीजस्तै। त्यसले अँध्यारो सुरुङमा आशाको किरण देखाएको छ।
धेरैलाई लाग्दो हो डा. केसीको अनशन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानभित्रको किचलोमात्रै हो। हुनत, डा. केसीलाई आफ्नै संस्थाको मायाले उद्वेलित बनाएको पनि हो तर उनले रोजेको विधिले शक्तिशालीको तजबिजमा जे गरे पनि हुने अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ। यस्ता चुनौती शासकहरूलाई रुच्दैन। शासकहरू राज्यलाई बपौती ठान्छन्। लोकतान्त्रिक मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। पारदर्शिता भनेको निर्णय गरेपछि त्यसको विधि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनुमात्र हैन। त्यस्तो निर्णयको औचित्य र निर्णयकर्ताको नैतिक वैधता पनि त्यसमा जोडिएको हुन्छ।
डा. केसीको अगिल्लो पटकको अनशनपछि डा. प्रकाश सायमी चिकित्सा शास्त्रका डिन नियुक्त गरिएका थिए। त्रिवि पदाधिकारीले बाध्य भएर डा. सायमीलाई स्वीकार गरेका थिए। मौका पाउनेबित्तिकै तिनले उनलाई असहयोग गर्न थाले। असहयोगमात्र हैन जे हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेर उनलाई नियुक्त गरिएको थियो त्यही काम गर्न दबाब पनि दिन थाले। डा. केसीजस्तै जुझारु स्वभावका भएका भए डा. सायमीले दबाब दिनेहरूको पोल खोलेर पदमा बसिरहने दृढता देखाउनु पर्थ्यो। डा. सायमीले इमानमा अडिन पद छाड्ने उपाय रोजे। तर, उनको पद त्यागले मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएर पैसा कमाउने गिरोहलाई पो सजिलो बनायो। अर्थशास्त्रको नियम लागु भयो। असल मुद्रा बजारबाट हराएपछि खराब मुद्रा चलनमा आयो। यसले संस्कार परिवर्तनका लागि भएको संघर्ष समाजका एकाध असल व्यक्तिले मात्र गरेर पुग्दैन भन्ने पनि सिद्ध भएको छ। परिवर्तनको रथ अगाडि बढ्दै जाँदा कुनै एउटा चुकुलमात्रै पनि फुस्क्यो भने दुर्घटना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रथमा चुकुलको साटो परेका बेला औँला हालेर पनि गुडाउन मद्दत गर्ने कैकेयीहरू आवश्यक हुन्छन्। ( तिनै कैकेयीले पनि जब साँच्चै नै क्रयविक्रयको बेला हुन्छ मन्थराले कान फुकेको निहुँ बहाना बनाएर भनिहाल्छिन् — 'रामलाई वनवास भरतकन त राज माग्छु म चाँडो गई।’ )
संस्कार परिवर्तन साँच्चै नै कठिन कार्य हो भन्ने त नेपाल मेडिकल एसोसियसनको निर्णयले पनि प्रमाणित गरेको छ। डा. केसीको समर्थनमा मेडिकल एसोसियसन पहिलो दिनदेखि नै संघर्षमा उत्रनुपर्थ्यो। सही र गलतका बीचमा पक्ष लिन पटक्कै ढिलो गर्नु हुँदैन। सत्यको पक्ष लिँदा पनि गलत बाटो समाउनु हुँदैन। मेडिकल एसोसियनका पदाधिकारीले डा. शशि शर्मालाई दबाब दिन देशभरका बिरामीलाई सजाय दिने बाटो अपनाए। आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दा अरूलाई पर्ने मर्काको बेवास्ता गरे। अर्थात्, सामन्ती संस्कारलाई नै पछ्याए। डाक्टरहरूको यो छनोट अश्वत्थामाले उत्तराको गर्भमा अस्त्र प्रयोग गरेजस्तै धर्मयुद्धको नीतिविरुद्ध छ। यसले डाक्टरहरूको पेसामाथि नै अश्वत्थामाको शिरमा लागेको कहिल्यै निको नहुने घाउजस्तै कलंक लाग्नसक्छ। उपचार बन्द गर्ने निर्णयले डाक्टरहरूलाई त्रिविका पदाधिकारीजस्तै तजबिजी बनाएको छ। मोर्चा जुन भए पनि पात्र र प्रवृत्ति उस्तै देखिएको छ।
सबै डाक्टरलाई उपचारै बन्द गर्न आह्वान गर्नुको साटो मेडिकल एसोसियनका पदाधिकारीले डा. शशि शर्माको कार्यालय अगाडि अनशन थालेका भए सायद बढी नैतिक दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। कालो पट्टी बाँधेर बिरामीको उपचार गर्दै डा. गोविन्द केसीको बचाउन दबाब दिन आग्रह गरेको भए सायद सरकार र त्रिवि पदाधिकारीमाथि बढी दबाब पर्थ्यो। बिरामीहरू स्टे्रचरमै बसेर पनि आन्दोलनमा निस्कने थिए। त्यो संसारले देख्ने थियो। झट्ट हेर्दा यो विधि उति आकर्षक र प्रभावकारी नदेखिएला। मामुली ज्वरो आउँदासमेत कडा मात्राको एन्टिबायोटिक खुवाउने बानी परेका डाक्टरहरूलाई मन पनि नपर्ला तर यसले चिकित्सा शास्त्रको रोग सधैँका लागि साँच्चै नै निको बनाउन सहयोग गर्ने थियो। दुर्भाग्य, डाक्टरहरूले राम्रो काम गर्न पनि नराम्रो विधि अपनाए। कस्तो विडम्बना! सत्याग्रहीको समर्थनमा चिकित्सकहरूले आफ्नो मूल धर्मविरुद्ध बिरामीको सेवा रोकेर आन्दोलन गर्ने रे। डाक्टर केसीले आफ्नो धर्म राम्ररी पालन गरेकाले उनीप्रति जनसमर्थन र सहानुभूति बढेको हो। बिरामीलाई अलपत्र पारेर आन्दोलनमा उत्रने डाक्टरहरूले भने आफ्नो मूल धर्मको रक्षा गरेनन्। भनिन्छ— 'धर्मो रक्षति रक्षितः ’। अर्थात्, धर्मको रक्षा गरेमात्र धर्मले पनि रक्षा गर्छ। बिरामीको उपचार रोक्नेबित्तिकै डाक्टरहरू धर्म च्युत भएका छन्। तिनको रक्षा अब डा. केसीको समर्थनले मात्र गर्न कठिन छ। अहिले डा. केसीको संघर्ष एकल आन्दोलनजस्तो देखिएको छ। अगिल्लो पटकका उपलब्धि रक्षा नहुनुको कारण आन्दोलनको स्वामित्व लिने उनी एक्लै हुनाले पनि हो। अहिले डा. केसीको पक्षमा देखिएको समर्थन यथार्थमा उनको मागभन्दा पात्रताको सम्मान हो। मेडिकल एसोसियसन आन्दोलनमा सरिक भएपछि यसको स्वामित्व पनि लिने बाटो बनाउनुपर्छ। अनि उपलब्धि खोस्ने आँट सहजै कसैले गर्नेछैन।
डा. शशि शर्मालाई उनकै अन्तरात्माले पनि धिक्कारेको हुनुपर्छ। सहयोगीको मृत्युको कारण बन्नु पर्योस भने उनको आत्माले पनि पक्कै धान्न सक्नेछैन। शर्माका परिवारजनमा पनि यसको दबाब परेको होला। आफन्तका लागि ग्लानिको विषय बन्ने कि गर्वको? डा. शर्माले राजीनामा दिँदैमा समस्या समाधान नहोला तर कम्तीमा उनले डा. केसीको जीवन रक्षा गरेको जस त पाउनेछन्। डा. शर्माको हठ 'चोरी मारिलियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।’ भनेजस्तो नहोस्!
उपचार रोकेर आन्दोलनमा उत्रने डाक्टरहरूको निर्णय यथार्थमा समसामयिक राजनीतिकै एउटा अनुहार हो। नेपाली राजनीतिमा साध्य असल भए साधनजस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने मध्ययुगीन चिन्तनकै प्रभाव बलियो छ। शसस्त्र संघर्ष र त्यसको महिमा गायन त्यसैको उदाहरण हो। पछिल्ला दिनमा देखिएको सहमतिका नाममा शासन गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यसैको सहउत्पादन हो। यथार्थमा यो शक्ति भयो भने कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने सामन्ती संस्कारकै अर्को रूप न हो। दण्डहीनताको कारक यही हो। भ्रष्टाचारको मूल कारण पनि यही हो। डा. केसीको अनशनले सायद उनले सोच्दै नसोचेका विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। अब नेपाली समाजले कुन बाटो समाउने हो रोज्ने बेला भएको छ। संसारका धेरै मुलुक अहिले पनि हिंसाकै बाटामा छन्। लोकतन्त्र शासन पद्धतिका रूपमा स्थापित भएकै समाजमा समेत जीवन शैलीमा सामन्ती प्रवृत्ति बलियोसँग जमेको छ। हाम्रो त झन् यसै पनि लोकतन्त्रको अभ्यासै नगरेको समाज। लोकतान्त्रिक अप्ठेरो बाटो हिँडेर ढिलै भए पनि सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पुग्ने कि हतार छ भनेर सहज तर गलत बाटो लाग्ने? अगुवाले बाटो बिराएका बेला रोजाइ सजिलो हुँदैन। तर, गलत बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्नै सकिँदैन। यत्ति हेका राखौँ।
Posted by Govinda at 1/21/2014 01:29:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 1/09/2014 07:26:00 PM No comments:
राजतन्त्र त गयो तर 'अन्धेर नगरी चौपट राजा : टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ वाला कथा भने नेपाली राजनीतिमा अझै सान्दर्भिक छ। राजाको रिस पोख्दैजाँदा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउनेसम्मको मूर्खता नेपालमा राजनीतिकै नाममा भइसकेको छ। जाति र क्षेत्रको पहिचान खोज्दा मुलुककै पहिचान मेटाउन उद्यत कालीदासहरू समाजमा गनिनसक्नु देखापरेका छन्। राज्य तमासे भएको छ भने राजनीतिक नेता गड्यौला।
पृथ्वीनारायण शाहमाथि केन्द्रित प्रहार प्रकारान्तरले नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि नै लक्षित हो तर, गड्यौलावर्गका शासकहरू आँधीको सुतुरमुर्ग बनिरहेका छन्।
नेपाली राष्ट्रियताको माया गर्नेहरू यस्तो अवस्थामा निराश हुनु स्वाभाविकै हो। निराश व्यक्ति वा समाजले कुनै नै कुनै सम्बल खोजेको हुन्छ। त्यसैले नेपाली पहिचान र स्वामिभानको माया गर्नेहरू आधुनिक नेपालका निर्माता कहलिएका पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन अग्रसर भएको हुनुपर्छ। राजा भएकैले इतिहासमा नाम लेखिएकालाई नेपाली जनताले सम्भि्करहनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर, आजको नेपालै बनाउने व्यक्तिलाई भने न समाजले बिर्सन सक्छ न बिर्सनै हुन्छ। पृथ्वीनारायण नेपाल भन्ने मुलुक रहुन्जेल नबिर्सने नाम हो। उनका यावत कमजोरी र त्रुटि केलाउनुपर्छ र कुनै अपराध गरेका छन् भने त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। कीर्तिपुरेमाथि भएको अत्याचारको कलंकबाट उनी मुक्त हुन पाउँदैनन्। यत्ति हो, नेपाल भन्ने मुलुकको अस्तित्वका लागि चाहिँ उनको गुन मान्नैपर्छ। उनलाई सम्झिनुपर्छ। राज्य उनीप्रति कृतज्ञ हुनैपर्छ र राष्ट्रिय एकताको एउटा आधार पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्ने मान्नुपर्छ। पृथ्वी जयन्ती मनाउन बिदै दिनु चाहिँ आवश्यक छैन। बिदा त यसै पनि धेरै भएको छ। बरु, समुदाय विशेषका पर्वमा दिइने बिदा कटौती गरे हुन्छ। बिदा दिँदा पनि सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिलाई मात्रै दिए हुन्छ। दसैँमा इसाई वा मुसलमानलाई किन बलजफ्ती बिदामा बस्न लगाउनेे? अनि तिनका पर्वहरूमा अरूलाई बिदा किन दिने? तर, पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवस भने घोषित गरिनुपर्छ।
पृथ्वीनारायण शाह महान् शासक हैनन् होला। उनले नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नैका लागि काठमाडौं उपत्यकामाथि आँखा गाडेका हुन् भन्दा पनि आपत्ति गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन। त्यतिबेलामा राजाहरूजस्ता हुन्थे र अझ भनौ राजारजौटा जस्ता हुन्छन् पृथ्वी पनि त्यस्तै थिए। तर, उनले यक्ष मल्ल र मुकुन्द सेनको गल्ती दोहोर्याकएनन्। राज्यलाई 'भोग्या’ भनेर भागबन्डा गरेनन्। भाइहरूको भाग नदिन भागबन्डा नगरेका होलान् तर पृथ्वीनारायण शाहले अखण्ड राखिदिएकै कारण अहिले नेपाल भन्ने मुलुकको अस्तित्व छ। यसका लागिमात्र पनि उनीप्रति हामी नेपाली कृतज्ञ हुनैपर्छ।
उनले जितेका ठाउँहरूमा अत्याचार गरेको उदाहरण छन्। तिनका लागि दोष पनि दिनुपर्छ। तर, सामान्यतः अन्यत्रका विजेताहरूले जस्तो हारेका मुलुकका प्रजामाथि व्यापक अत्याचार गरेनन्। 'कुल धर्म थाम्नु’ भनेर बरु सहिष्णुता नै देखाए। कुनै समुदाय वा धर्म मास्ने उनको चाहना कतै व्यक्त भएको देखिँदैन। यसैले अहिले पहिचानको खोजी गर्नेहरूले पनि लहैलहैमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति द्वेष राख्नुपर्ने थिएन। नेपालै नरहेको भए अहिले जाति र क्षेत्रको पहिचान कहाँ खोजिन्थ्यो?
पृथ्वीनारायण स्वतन्त्रता सेनानी हैनन्। त्यस्तै उनले जितेका रजौटाहरू मल्ल, सेन वंशका राजा पनि सामन्त नै थिए। त कुनै गणराज्यका नायक थिएनन्। पृथ्वी विजयको सपना देख्ने महत्वाकांक्षी योद्धा हुन्। यसैले उनलाई महत्वाकांक्षी राजाकै रूपमा हेर्नु र मूल्यांकन गर्नु न्याय हुन्छ। ल भैगो! नेपाल एकीकरण गरेर एउटा स्वतन्त्र मुलुकको बीजारोपण गर्ने महान् लक्ष्य लिएर उनले गोरखाबाट विजय अभियान थालेका हैनन् भन्ने पनि मानौ। तर पृथ्वीनारायणले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्तिकै लागि पनि लडाइँ गरेर वरपरका राज्य नजितेका भए अहिले नेपाल भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रमा कहाँ हुने थियो होला र? बाइसे र चौबीसे रजौटा त पक्कै रहने थिएनन् होला। अनि अंग्रेजहरूलाई यस भूखण्डमा उपनिवेश विस्तार गर्न रोक्ने अर्को कुनै शक्ति उत्पन्न हुने थियो होला र?
नियतिलाई नै जस दिऊँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई उसले नेपाली पहिचानको जनक बनायो। उनैको नेतृत्वमा गोरखाबाट थालिएको विजय अभियान सफलताको उत्कर्षमा पुग्यो। नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानसँग उनको नाम अभिन्नरूपमा जोडिन पुग्यो। उनको वंशको शासन समाप्त भए पनि अहिलेसम्म नेपालको अखण्डता कायमै छ। नेपालको अस्तित्व कायम रहनुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ। हैन, नेपालको विखण्डन हुनुपर्छ भन्ने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायणलाई जति दुत्कारे पनि हुन्छ। उनलाई इतिहासबाटै मेटाइदिए पनि हुन्छ।
'असली हिन्दुस्थान’ बनाउने चाहना भए पनि उनले इसाईबाहेक अरू धर्ममाथि हस्तक्षेप गरेनन्। इसाई धर्मावलम्बीहरूले संसारभर धर्म र व्यापारका नाममा प्रवेश गरेर उपनिवेशको विस्तार गर्दै थिए। त्यसलाई पृथ्वीनारायणले रोकेकै हुन्। अपराध हो भने त्यो उनले गरेकै हुन्। अहिले विभिन्न जाति र संस्कृतिका नेपाली आआफ्ना मौलिक संस्कृतिको पुनर्जागरणमा रमाउन थालेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले उतिबेला इसाईहरूलाई नरोकेका भए सायद अहिलेका कतिपय संस्कृतिहरू दन्त्यकथा बनिसकेका हुनेथिए। इतिहास साक्षी छ, बाइबल लिएर घुसेर धेरै मुलुकमा तिनले राजपाठ खोसेेका थिए। संसारका थुप्रै मुलुकका भाषा उपनिवेशकालमा तिनले समाप्त पारेका छन्। पराजित जातिको संस्कृति मेटाएका छन्। सबैभन्दा बढी तिनको पञ्जामा परेको जाति र धर्मलाई खोक्रो बनाइदिएका छन्। यिनलाई उतिबेला रोकेकैले नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको अस्तित्व बाँकी रहेको हो। यति स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन।
नेपालको पहिचान मेटिए हुन्छ, कमजोर समुदायको संस्कार कुलधर्म लोप भए हुन्छ र भौगोलिकरूपमा पनि मुलुक अखण्ड रहनुपर्दैन भनेर ठान्नेहरूबाहेक नेपाली राष्ट्रियतामा गर्व गर्ने अरूले पृथ्वीनारायणप्रति बैगुनी हुनुपर्ने कारण देखिँदैन। संघीयता र स्वायत्त प्रदेशको हदसम्म जाँदा पनि पृथ्वीनारायणको अस्तित्वले बाधा दिँदैन। नेपालको विखण्डनै होस् भनेर चाहने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायणका सालिक ढाले हुन्छ। उनलाई इतिहासको पानाबाटै मेटाए हुन्छ। पृथ्वीनारायण भन्ने शब्दै मेटाउन सके नेपालको भौगोलिक एकीकरण वा सीमा पनि मेटाउन सजिलो जो हुन्छ। यसैले जो जुन किनारामा उभिने हो उभिए हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले जग राखेको नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र पहिचान कायम रहोस् भन्ने चाहने हो भने पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाऊँ। हैन राष्ट्रिय अखण्डता कायम रहनु जरुरी छैन वा विखण्डनै होस् भन्ने चाहना छ भने उनलाई दुत्कारौँ।
पृथ्वीनारायणमाथिको आक्रमण र उनको मानमर्दनको प्रयास नेपाली पहिचान मेटाउने नियतले थालिएको हो। हामी जानीनजानी त्यस षड्यन्त्रमा गोटी भएका छौँ। मुलुकमा कुनै राजनेता हुन्थ्यो भने जनताले अग्रसर हुनुपर्ने थिएन। दुर्भाग्य, अहिले विवेक र स्वाभिमानहीनहरूले शासन गरिरहेका छन्। तिनको तुच्छताले विवेकको वाक्य बन्द भएको छ। नेपाल भन्ने मुलुकको स्वतन्त्रता र पहिचान आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको मर्यादा मेटिन नदिऊँ।
महाभारतको एउटा प्रसंग। महाभारत युद्ध सकिएपछि कृष्ण द्वारका पर्के। गान्धारीको श्राप लागेर यदुवंशको विनाश भयो। कृष्ण स्वयं पनि व्याधाको वाणबाट मारिए। यदुवंशको विनाश भएको सुनेपछि अर्जुन द्वारका गए। यादव नारीहरूलाई हस्तिनापुर लैजान भनेर रथमा राखेर फर्के। बाटामा डाँकाहरूले आक्रमण गरे। परमवीर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनले ती डाँकाहरूको सामना गरेर स्त्रीहरूलाई जोगाउन सकेनन्। महाभारत युद्धपछि कृष्णको प्रयोजन सकिएको थियो। उनी गए। कृष्णकै कारण शक्तिशाली भएका अर्जुनको शक्ति पनि सकियो।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई संविधान सभाको चुनाव गराउने आँट र सुझबुझ देखाएकोमा स्याबासी दिन कन्जुसी गर्नुपर्दैन। तर अब उनको प्रयोजन सकियो। इतिहासले उनलाई यसैका लागि सम्भि्कनेछ। यसैले अरू महत्वाकांक्षा नदेखाउनु नै उनका लागि उचित हुनेछ। उनलाई नियतिले खटाएको काम जो सकियो। संविधान सभा सकेसम्म चाँडै बोलाउन सहयोग गरेमै चुनाव गराएको पनि काम लाग्छ। अनि, संविधान सभा चाँडै बोलाउन जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गरे भइहाल्थ्यो। राष्ट्रपति महोदयलाई पनि नचाहिने विषयमा कचकच गर्ने रहर किन लागेको हो कुन्नि?
Posted by Govinda at 1/08/2014 10:56:00 AM No comments: